Muuri News Network » Faah Faahin Hordhac ah + Sawirro: Diyaaradii Masar ee la Afduubtay
Faah Faahin Hordhac ah + Sawirro: Diyaaradii Masar ee la Afduubtay
Mar 29, 2016 - Comments off
Diyaarad ay leedahay shirkada EgyptAir ayaa la afduubtay kadib markii ay ka duushya garoonka diyaaradaha magaalada Alexandaria, kuna sii jeeday magaalada Qaahira ee casaimada dalka Masar.
Nin la sheegay in waxyaabaha qaraxa ay jirkiisa ku xiranyihiin ayaa afduubtay diyaaradan ay saaran yihiin 55-rakaab ah iyo 7-shaqaalaha diyaarada ah, waxaana afduubka diyaardaan xaqiijiyay maamulka shirkada iyo waliba Dowlada Masar.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo diyaarada la afduubtay ayaa sheegaya in Diyaarada ku degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala Qubrus, waxaa la hakiyay howlihii duulimaadka garoonka ay ku degtay iyadoona ciidamada amaanka ay hareereeyeen diyaarada.
Dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaarada ayaa inta badan loo ogolaaday in ay diyaarada ka degtaan, waxaana hada diyaarada gudaheeda ninkan hubeesan uu ku heestaa dhoor qof oo ajaaniib ah iyo shaqaalaha diyaaradaha.
Wali ma cada ninka afduutay diyaarada waxa uu yahay , mana jiraan wax dalabaad ah uu soo jeediyay ninkan, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in lagu bad baadiyo dadka diyaarada gudaheeda lagu heesto.